Isdhexgalka naqshadeynta - u heellan BIM horumarsan iyada oo loo marayo Digital Cufflinks - Geofumadas
Isdhexgalka naqshadeynta - u heellan BIM horumarsan iyada oo loo marayo Digital mataano
Oktoobar, 2019 tabo cusub, Microstation-Bentley
Mataanaha dhijitaalka ah ee "Evergreen" ayaa ballaarinaya qiimaha shaqada injineerrada kaabayaasha iyo barnaamijyadooda moodellada furan iyo jilitaanka ee Bentley inta lagu gudajiro wareegga nolosha ee hantida
Bentley Systems, Incorporated, bixiyaha caalamiga ah ee softiweerka dhamaystiran iyo adeegyada daruuriga ah ee mataanaha dhijitaalka ah si loo hormariyo naqshadeynta kaabayaasha, dhismaha iyo howlaha, ayaa maanta ku dhawaaqay ku daris iyo cusbooneysiin ku saabsan qaabkeeda furan iyo jilitaanka barnaamijyada si loo hormariyo injineernimada mataanaha dhijitaalka ah ee ku jira dhammaan meertooyinka nolosha. Bentley barnaamijyada furan waxay taageeraan wadashaqeyn, isdhaafsi, iyo shaqooyin dijitaal ah oo otomaatig ah oo fidiya maadooyin badan oo laxiriira kaabayaasha. Hadda, adeegyo daruur cusub oo loogu talagalay mataanaha dhijitaalka ah, qiimaha ganacsiga iyo aqoonta sida loo kordhiyay dhammaan dhismooyinka iyo wejiyada hawlgalka ee kaabayaasha dhaqaalaha.
"Aqbalitaanka ballaaran ee BIM wuxuu sifiican uga faa iidaystay xirfadleyda iyo mashaariicda AEC shan iyo tobankii sano ee la soo dhaafay, laakiin hadda, iyadoo la adeegsanaayo adeegyada daruuraha, moodel qaabeynta dhabta ah iyo falanqaynta horumarsan, waxaan ku hormarin karnaa BIM iyada oo loo marayo mataanaha dhijitaalka ah »Santanu Das, oo ah kuxigeenka madaxa sare ee qaabeynta is dhexgalka ee Bentley ayaa yiri. "Ilaa hadda, adeegsiga BIM wuxuu ku koobnaa keenista qaabdhismeedka aan rasmiga ahayn, kaas oo, ka dib markii la geeyay dhismaha, ay si dhakhso ah u dhacday, oo ay luminayaan suurtagalnimada qiimaha dheeriga ah ee macluumaadka injineernimada ee kuxiran moodooyinka BIM. , waxaan ku furi karnaa macluumaadka injineerinka qaab BIM oo leh qeybaha dhijitaalka ah ee ay ka kooban tahay bilawga, si joogto ah u cusbooneysiinno duruufaha dhijitaalka ah ee leh aqoonsiga loo yaqaan 'drone iyo moodellada dhabta ah' - halkaana waa meesha ay runtii xiiso u yeelato -, sii wad qaabeynta iyo jilitaanka ku habboonaanta hanti oo dhan inta taariikh nololeedkeeda dhijitaalka ah lagu jiro. Ugu dambeyntiina, qiimaha xogta injineernimada ee nooca BIM ayaa lagu fidin karaa wixii ka dambeeya wareejinta iyo wareejinta howlaha, hubinta iyo hagaajinta labadaba mashruuca iyo waxqabadka hantida. Horumar BIM ilaa 4D iyada oo loo marayo mataanaha dhijitaalka ah ee Evergreen waxay ka dhigan tahay in moodooyinka naqshadeynta iyo jilitaanku ay u adeegi karaan ujeedooyin ka sarreeya gaarsiinta mashruuca, waxay la mid noqon doontaa DNA-da dijitaalka ah ee hantida nool!
Adeegyo cusub oo ku jira Cloud Twins Cloud for Design Integration
Is-dhexgalka naqshadeynta Bentley waxay bixisaa hadda laga bilaabo codsiyada desktop illaa adeegyada daruuraha, oo siiya ururada awood u leh inay abuuraan, ku sawiraan 4D iyo falanqeeyaan mataanaha dijitaalka ah ee kaabayaasha. Adeegyada ITwin waxay u oggol yihiin maamulayaasha macluumaadka dijitaalka inay ku daraan macluumaadka injineernimada ee ay abuureen aaladaha naqshadaha kala duwan ee mataano dijital ah oo nool, ku dar xogta laxiriirta kuna habeeyaan moodellada dhabta ah, iyagoon carqaladeynin aaladohooda hadda ama howlaha.
Dib u eegista Naqshadaynta fududeeyaa fadhiyada dib u eegista naqshadeynta deg degga ah. Waxay u oggolaaneysaa xirfadleyda inay bilaabaan dib u eegista naqshada ad hoc ee jawiga '2D / 3D' isku dhafan, iyo sidoo kale kooxaha mashruuca ka shaqeeya mataanaha dijitaalka ah si ay u qabtaan dib u eegista naqshadeynta iyo iskuduwidda isuduwidda naqshadeynta isku dhafan ee isku dhafan. Waxay bixisaa qulqulka shaqada:
(Xirfadlayaasha) si ay u calaamadeeyaan oo ay uga faalloodaan qodobbada moodooyinka 3D una beddelaan inta u dhexeysa aragtida 2D iyo 3D adigoon ka tegin jawiga 3D
(loogu talagalay mashruucyada adeegsanaya mashruuca ProjectWise) si loo muujiyo mataanaha digital-ka ah ee loo yaqaan '4D': qabashada beddelka injineernimada ee weheliya jadwalka mashruuca lana bixiyo diiwaan mas'uul ah oo ah kii beddelay waxa iyo goorta
furtaan furan, adeegani wuxuu siiyaa adeegsadayaasha OpenPlant jawi shaqo oo la qaybiyey iyo tixraacyo jihada u dhexeeya matalaya 2D iyo 3D ee qaybaha dhijitaalka ah.
Codsiyada Modeling-ka Furan iyo Codsiyada Simulation Furan
Wadaagista qaybaha iyo isku xirka qulqulka shaqada dhijitaalka ah ee u dhexeeya edbinta waa aasaaska jawiga moodalka furan. Waxay ka kooban tahay injineeriyada ku saleysan MicroStation-ka khaaska ah iyo codsiyada BIM ee noocyada hantida iyo xalalka, jawiga moodada furan ee Bentley wuxuu sare u qaadaa wada shaqeynta, fududeynta xalinta khilaafaadka iyo soo saarida qeybaha kala duwan ee barnaamijyada.
Kobcinta codsiyadeeda ee Nidaamka MicroStation wuxuu dammaanad ka qaadayaa wada-shaqeynta, helitaanka deegaan ku xiran macluumaadka iyo adeegyada dhijitaalka ah sida Xarunta Qalabka ee maktabadaha ka kooban ee la wadaago iyo GenerativeComponents ee awoodaha naqshadeynta guud. Intaa waxaa sii dheer, falanqaynta iyo jilitaanka injineernimada isku dhafan waxay u oggolaaneysaa naqshadeeyayaasha inay soo dhex mariyaan duruufo kaladuwan si ay u gaaraan xalka ugu habboon, ma aha oo keliya naqshadda bilowga ah, laakiin sidoo kale waxqabadyada xiga iyo Horumarinta raasamaalka ee hantida kaabayaasha.
Furan Cusboonaysiinta Codsiyada Modeling-ka
(Cusub) OpenWindPower wuxuu bixiyaa wada shaqeyn dhexmarta juqraafi ahaan, qaab dhismeedka iyo naqshadeynta dhuumaha iyo falanqaynta, otomaatiga shaqada iyo isweydaarsiga xogta ee udhaxeysa mabaadi'da, si loo yareeyo khatarta ku jirta qaabeynta iyo howlgalada beeraha dabaysha dabaylaha bada iyo biyaha sababa. . OpenWindPower wuxuu siinayaa adeegsadayaasha muunad dabayl ah suurtagalnimada xaqiijinta heerka naqshadeynta, fulinta falanqaynta, yareynta halista iyo soo saarista macluumaadka ku saabsan wax qabadkooda.
"OpenWindPower" waxay soo gaabinaysaa wareegga guud ee naqshadeynta waxayna si wax ku ool ah u xallineysaa mushkiladaha waaweyn ee naqshadeynta naqshadeynta, iyagoo yareynaya qiimaha horumarinta dabaysha badda, "ayuu yiri Dr. Bin Wang, ku xigeenka madaxa injineerinka Machadka Cilmi-baarista cusub. Tamarta, POWERCHINA Huadong Engineering.
(New) OpenTower waa codsi si gaar ah loogu talagalay naqshadeynta, dukumintiga iyo soo saarista munaaradaha cusub ee isgaarsiinta, iyo sidoo kale falanqaynta deg degga ah ee munaaradaha isgaarsiinta ee milkiilayaasha munaaraddu, la taliyayaal iyo hawl wadeenno u baahan in ay had iyo jeer cusboonaysiiyaan qalabka. Hordhaca OpenTower waxaa loo qorsheeyay sii deynta xigta ee 5G.
“Ayadoo la kaashanayo codsiyada Bentley, qaabeynta iyo falanqaynta dhismayaasha ayaa sahlan, dhaqso badan oo la isku halleyn karo. Waxay sidoo kale siineysaa macaamiisheena qanacsanaanta, kalsoonida iyo xasilloonida maskaxda, waxayna wanaajineysaa amniga shacabka, ”ayuu yiri Frederick L. Cruz, madaxweynaha iyo madaxa shirkadda FL Cruz Engineering Consulting.
Naqshadeeyaha Saldhigga OpenBuildings Waxay hadda kujirtaa LEGION waxayna wanaajisaa tayada qaabeynta iyagoo wanaajinaya naqshada shaqada ee xarunta saldhiga dhismaha iyo jidadka safarka dadka lugaynaya.
OpenSite Designer Waxaa hada ka mid ah awooda degenaanshaha, taageerida fikirka iyo qaabeynta xirmooyinka guryaha la dego, kala soocidda shirqoollada, iyo abuuritaanka shirqoollada caado loo sameeyo.
Naqshadeynta Buugga 'OpenBridge' Hadda waxay isku daraa OpenBridge Modeler oo ay la socoto falanqaynta iyo astaamaha naqshada ee LEAP Bridge Concrete, LEAP Bridge steel iyo RM Bridge Advanced.
OpenRoads SignCAD OpenRoads waxay cusbooneysiisaa si ay u fuliyaan moodooyinka 3D ee calaamadaha gudaha nashqadeynta wadooyinka cusub ama jira.
Fur cusbooneysiinta arjiga jimicsiga
(Cusub) Nidaamyada 'Bentley Systems' waxay shaaciyeen helitaanka Citilabs, si loogu oggolaado in gawaarida 'CUBE taraafikada' isku-xirnaanta laga heli karo gudaha OpenRoads.
Codsiyada juquraafiyadeed ee PLAXIS iyo SoilVision waxay u oggolaanayaan injineerada inay fuliyaan habab badan oo falanqeyn ah, iyadoo aan loo eegin inay yihiin cunsur wanaagsan ama inay xad u lahaadaan isu-dheellitirka. Wada shaqeynta cusub ee leh RAM, STAAD iyo OpenGround waxay wanaajineysaa tayada xalka guud ee dhismayaasha guud ee naqshadeynta isku dhafan iyo falanqeynta carrada, dhagaxyada iyo qaababka la xiriira.
Wadashaqeyntaha dhijitaalka ah ee isku-dhafka naqshada
(Iyadoo Siemens) Bentley OpenRoads ayaa ka faa'iideysan doonta Aimsun ka Siemens ee jilitaanka taraafikada heerkiisu hooseeyo.
(Iyada oo la adeegsanayo Siemens) Naqshadeeyaha soo socda ee shirkadda Diyaaradda OpenRail waxay isku daraa naqshadeeye OpenRail iyo Siemens SICAT Master.
(Iyada oo la adeegsanayo Siemens) OpenRail-Entegro Train Simulator wuxuu isku daraa Siemens Entegro iyo Automatic Train Control Simulation oo ay weheliso Bextley ContextCapture, OpenRail ConceptStation, DesignRail Designer iyo LumenRT, oo loogu talagalay howlgalada leh Mataanaha Digital.
Post Previous" Hore Wararka Geo-Engineering - Sannad Kaabayaasha - YII2019
Post Next «EthicalGEO» - baahida loo qabo in dib loo eego halista isbeddellada geospatialNext »